Mepee XNUMXth na oku maka mmalite osooso Top Mkpụrụ Lablọ nyocha | ECommerce ozi ọma
Mepee XNUMXth na oku maka mmalite ome osooso Top Mkpụrụ Lablọ nyocha
Eva Maria Rodriguez | | Eziokwu na akụkọ, StartUps na ndi oru itumgbere ahia
Top Mkpụrụ Lab, naanị Spanish ome osooso so Netwọsọ Mgbasa Gburugburu ụwa, ga-etinye ego euro 20.000 na nke ọ bụla n'ime ise startups ndị mmeri nke V Acceleration Call. Usoro osooso ga-amalite na Nọvemba 6, 2014 wee kwụsị na Machị 31, 2015.
Oge ndebanye aha maka mmalite teknụzụ Ọ na-emeghe ruo September 21. Ka ọ dị ugbu a, a ga-edepụta ọrụ ndị nwere ike kachasị mma ka ha bụrụ akụkụ nke mmemme osooso.
2 Mmalite nke mmemme
4 Chọrọ isonye
5 Selọ nyocha Top Mkpụrụ, GAN so na Eprel 2014
6 Ozi na ndebanye aha
Isi akwukwo ohuru nke V Call of Top Seeds Lab bu nbawanye na ntinye ego, nke si na 15.000 rue euro 20.000, na ohere nke irite uru na mmemme mmeghari site na uru nke nke Global Accelerator Network (GAN), dika ohere nke ịnweta ndị ndụmọdụ kachasị mma na ndị na-etinye ego na ọkwa mba ụwa ma ọ bụ nwee ọrụ dịgasị iche iche maka ụlọ ọrụ na-eme ngwa ngwa.
Mmalite nke mmemme
Usoro mmepe ga-amalite na Nọvemba 6, 2014. Ihe ngwangwa nke ngwangwa nke ọrụ mmeri ga-enweta gụnyere ndụmọdụ ntinye ego mbụ, ọzụzụ kpụ ọkụ n'ọnụ, oghere ụlọ ọrụ na Madrid, ịnweta ndị ọchụnta ego na ọrụ ndị Top Seeds Lab na ndị ọrụ ya nyere. ọrụ iwu, ọrụ ego ma ọ bụ ọrụ nnabata, n'etiti ndị ọzọ.
A ga-eme usoro oru ngo a n'ụzọ ndị a:
Nnata nke ngwa (ruo na September 21).
Nhọrọ tupu: Otu ndị nwere ike ịhọrọ aha 20
Bọchị Jury: Ndị otu ahọpụtara aha 20 ga-eweta ọrụ ha n’ihu onye ọka iwu ọkachamara ahọrọ site na Top Top Seeds Lab.
Nkwenye: ndị juri ga-akpachapụ anya otu izu ịhọrọ ọrụ 10 nke ọkara ikpeazụ.
Akwụkwọ nke 10 semifinalist project
Ajuju ajuju: A ga-enwe mkparịta ụka ihu na ihu na nke ọ bụla n'ime ọrụ 10 ọkara ikpeazụ na Top Seeds Lab Global Facilit iji nye ha ndụmọdụ banyere mkpebi ikpeazụ.
Nhọrọ nke otu egwuregwu ise na-emeri: Mgbe a gbara ajụjụ ọnụ na Global Facilitator, a ga-ahọrọ ndị otu egwuregwu 5 kachasị elu ka ha bụrụ akụkụ nke usoro osooso nke Top Seeds.
Mmalite nke usoro osooso: Ndị otu ga - emeri ga - ebido usoro mmepe ahụ na ọrụ na uru niile nke Top Seeds Lab na-enye ndị ọchụnta ego
Selọ nyocha Top Seeds na-achọ mmalite na ụdị azụmaahịa dabere na teknụzụ.
Agaghị eweputa ihe omume metutara udiri ihe ndia.
Mmalite na usoro mmepụta ihe
Mbido ndị na-asọmpi ọ bụla nke mmalite ọ bụla na pọtụfoliyo Top Seeds Lab.
Mbido na ngwaahịa enweghị nke kacha nta.
Mmalite nke ndị mmekọ guzobere enweghị paspọtụ Europe ma ọ bụ ebe obibi na ikike ọrụ na Spain.
Nwee ma ọ dịkarịa ala ndị mmekọ abụọ na-arụ ọrụ nke CEO, CTO, CMO ma ọ bụ ndị yiri ya na-etinye oge zuru oke na mbido mmalite.
Dị njikere ịnwe ma ọ dịkarịa ala ndị mmekọ abụọ na-egwu egwuregwu bụ ndị na-egwu CEO, CTO, CMO ma ọ bụ ọrụ ndị yiri ya ịkwaga na ụlọ ọrụ Top Seeds Lab n'oge ọnwa ise nke usoro mmepe.
Dị njikere ikenye n'etiti 10% na 15% nke mbak maka mgbanwe ego, ọ bụghị n'okpuru mkparịta ụka, nke puku euro iri abụọ (€ 20.000). Anyị ga-elebara ụlọ ọrụ gị anya n'etiti euro otu narị na iri puku atọ (€ 130.000) na narị puku euro abụọ (€ 200.000).
Dịrị njikere ịbanye na nkwekọrịta onye ọ bụla.
Selọ nyocha Top Mkpụrụ, GAN so na Eprel 2014
Eprel gara aga, Top Seeds Lab ghọrọ onye otu Global Accelerator Network (GAN), naanị oku a na-akpọ TechStars na otu onye isi nke White House's Startup America Initiative. N'ụzọ nke a, Top Mkpụrụ Lablọ nyocha bụ akụkụ nke a na netwọk na-agụnye 50 na-eduga ome osooso si gburugburu ụwa.
Netwọk GAN zuru ụwa ọnụ gụnyere ihe karịrị iri ise nke ngwa ngwa mmalite ụwa (gụnyere Techstars, Startup Bootcamp, Flat6Labs na Launchpad LA), n'ihe karịrị obodo 80, na kọntinenti isii, tinyere ihe karịrị ọrụ 5.100, $ 950M welitere na ego na $ 750K nke ego kwa ụlọ ọrụ.
Ozi na ndebanye aha
Knowmatakwu banyere oku V nke Top Mkpụrụ slọ nyocha maka mmalite ndị dabere na teknụzụ na ịdebanye aha, gaa topseedslab.com/kpo oku
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » StartUps na ndi oru itumgbere ahia » Mepee XNUMXth na oku maka mmalite ome osooso Top Mkpụrụ Lablọ nyocha
Igwu wayo na eCommerce, usoro iji luso ya agha
Banyere kaadị na-enweghị kọntaktị ọ na-adịkwaghị mkpa itinye kaadi n'ime igwe ndọrọ ego iji rụọ ọrụ